केपी ओली रक्षात्मक, मोदी आक्रामक ! | Tinau FM 98.2 Mhz
२७ वैशाख, काठमाडौं । केही साताअघि बालुवाटारमा वाम नेताहरुको बैठक बसिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मोबाइलमा घण्टी बज्यो । फोन गरेका थिए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले । फोन रिसिभ गर्दै ओली बैठकस्थलबाट एकान्ततिर गए ।मोदीलाई नेपालमा मे २५ तारेखमा निम्त्याउने सरकारले गृहकार्य गरिरहेको थियो । तर, मोदीले आफू मे ११ मै नेपाल आउने ओलीलाई बताए । कर्णाटकको चुनाव प्रचार सकेर सीधै पटना आउँछु, अनि त्यहाँबाट जनकपुर हुँदै काठमाडौं आउँछु भन्ने प्रस्ताव मोदीले ओलीसमक्ष राखे । प्रस्ताव भन्दा पनि यो बोधार्थ जस्तो थियो ।
वाम एकता संयोजन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ब्रिफिङ अनुसार जनकपुर हुँदै नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालको सुरक्षा संवेदनशीलतामा अप्ठ्यारो पो पर्छ कि भनेर उनले प्रतिक्रिया दिएका थिए ।तर मोदीले केही पनि हुँदैन, मैले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई दिल्लीमा नभई गुजरातमा स्वागत गरेकै हुँ भन्ने जवाफ दिएर फोनबाटै कन्भिन्स गरे ।
सहभागी एक नेताका अनुसार, वाम बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘मोदीले त्यसो भनेपछि मैले पनि ठीकै छ नि भनिदिएँ, उनी जनकपुर हुँदै आउने भए ।’
मोदीको नेपाल भ्रमणबारे प्रधानमन्त्री ओली दुईवटा प्रेसरमा परेका छन्ः एउटा त नेपालले तय गरेको मितिभन्दा अघि नै मोदी आफैंले तोकेको मितिमा भ्रमण तय गरियो, यसले गर्दा तयारीको काम हुन सकेन । रातारात बाटो पिच गर्नुपर्‍याे भने भ्रमणका एजेण्डाहरु पनि केही तयार भएनन्, अरुण तेस्रो र कृषि अनुसन्धान साझेदारी बाहेक ।
केपी ओलीमाथि परेको अर्को दबाव हो–सीधै जनकपुर आगमन र नागरिक अभिनन्दन । मोदी भ्रमणको यो कार्यतालिका स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि त्यति रुचिकर लागेको थिएन तर उनले बाध्य भएर ‘हुन्छ’ भनिदिए ।
केपी ओली भारत भ्रमणमा जाँदा पनि नेपाल सरकारले कुनै तयारी गरेको थिएन । मोदीले छिटो आउनुपर्‍याे भनेर फोन गरेको गर्‍यै गरेपछि ओली दिल्ली हानिएका थिए । परिघटनाहरुलाई हेर्दाखेरि मोदीको भ्रमणमा केपी ओली रक्षात्मक र मोदी आक्रामक देखिएका छन्
मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई गुजरातमा स्वागत गर्नु र मोदीले जनपुरमा नागरिक अभिनन्दन ग्रहण गर्नु एउटै प्रकृतिका विषय होइनन् । मधेसमा नेपालको सुरक्षा सम्वेदनशीलता र भारतीय हस्तक्षेपको विगत सौहाद्रपूर्ण छैन । र, यसमा मोदीले नेपालको संवेदनशीलतालाई गम्भीर रुपमा लिएको भन्दा पनि खेल्न खोजेको प्रष्टै देखिन्छ ।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको सरकार यस विषयमा चुक्यो ।
के नेपालले सुरक्षा दिन सक्दैन ?
मोदीको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा जसरी भारतीय सुरक्षा कमाण्डोहरु काठमाडौं र मधेसमा प्रवेश गरेका छन् । यसले नेपालको सुरक्षा व्यवस्था निरीह र कमजोर छ भन्ने सन्देश गएको छ ।
एउटा विदेशी पाहुनालाई सुरक्षा दिनका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी आफैं सक्षम हुँदाहुँदै पनि भारतबाट सुरक्षा टोलीहरु तडक–भडकपूर्ण ढंगले काठमाडौं र मधेसमा उत्रिनु सार्वभौम देशका लागि गौरवको विषय होइन । जबकि नेपालका प्रधानमन्त्री दिल्ली जाँदा सरक्षा गार्डबाहेक कोही लगिएको हुँदैन ।
कुनै विदेशी पाहुना नेपाल आउँदा उनको सुरक्षा गर्नु हाम्रो देशको दायित्व हो । नेपालका सुरक्षाकर्मीहरु विश्वको शान्ति सेनामा खटिएका छन् । स्वयं भारतमा गोर्खा सैनिकले सुरक्षा दिएका छन् । यो अवस्थामा ओली सरकारले नेपालका सुरक्षा अंगको मोराल बढाउने काम गर्न सकेन, यो अर्को रक्षात्मक स्थिति हो ।
परिघटनाहरुलाई हेर्दाखेरि मोदीको भ्रमणमा केपी ओली रक्षात्मक र मोदी आक्रामक देखिएका छन् ।
केपी ओली भारत भ्रमणमा जाँदा पनि नेपाल सरकारले कुनै तयारी गरेको थिएन । मोदीले छिटो आउनुपर्‍याे भनेर फोन गरेको गर्‍यै गरेपछि ओली दिल्ली हानिएका थिए ।
दिल्ली जानुपूर्व के–के सहमति गर्ने भन्ने कुनै तयारी थिएन, उहीँ गएपछि पानीजहाज र रेलसम्बन्धी सम्झौता गर्ने निधो भएको थियो ।
राष्ट्रवादी अडानका साथ सरकारमा पुगेका ओली पहिले चीन भ्रमणमा जाने धेरैको अनुमान थियो, तर उनी पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै दिल्ली गएका थिए ।
अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा पनि कुनै गृहकार्य भएको छैन । मोदीले तीर्थाटन गर्नेछन् र अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्नेछन्, बस् यतिमात्रै कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
तर भ्रमणका बेला मोदीले कुनै ठूलो आर्थिक सहायता घोषणा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने ओली सरकारको चाहना रहेको सूत्रहरु बताउँछन् ।
मोदी यस्तो हतारोमा आउँदैछन् कि नेपाल सरकारले जनकपुर र काठमाडौंमा रातारात सडक मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । बाटो खाल्डाखुल्डी भएको र सिंहदरबारमा ठाउँ नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र मोदीको भेट पशुपति छेउछाउको तारे होटलमा मिलाइएको छ ।